ပြည်သူများ မျှော်လင့် နေကြသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ပါပြီရှင်.။
ယနေ့ ညနေ ၅နာရီတွင်ပြည်သူများ မျှော်လင့် နေကြသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပါပြီးရှင်.။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တော နေအိမ်အတွင်း တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပြီး နအဖဥက္ကဋ္ဌ၏ အမိန့်ဖြင့် ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်နှင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ကျခံခဲ့ရပါတယ်။
ယနေ့ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်သွားပါပြီး.။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် သူမအား စောင့်ကြိုနေသော ပြည်သူ လူထုကြီးအား ထွက်ပြီး ကိုယ်တိုင် နုတ်ဆက် ခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် မိမိတို့ နေထိုင်ရာ နေအိမ် များ သို့ စည်းကမ်း ရှိစွာဖြင့် ပြန်လည် ကြပါရန် ပြောဆို ခဲ့ ပြီး မနက်ဖြန် နေ့လည် (၁၂)နာရီတွင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးသို့ သူမ လာရောက်ပါမည်ဟု ပြောကြားသွား ပါသည်.။သူမ၏ နေအိမ်တွင် အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များ နှင့်သူမ တွေ့ဆုံနေပါသည်ဟု သတင်း ရရှိပါသည်.။ပြည်သူ လူထု ကြီးကို ညီညီညွတ်ညွတ် နှင့် လိုချင်သော ပန်းတိုင်သို့ ရောက် ရှိအောင် ကြိုးစား သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားပါသည်ဟု သိရှိရပါသည်.။
ပြည်သူလူထု လေးစား ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ခံယူထားသော ကျမတို့ ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင် ပြည်သူလူထုကြီးကို ထွက်ရောက် နုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားနေပုံ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, November 13, 2010 Links to this post
ယခု ရရှိသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နောက်ဆုံးသတင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏နေအိမ်ခြံရှေ့သို့ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် များဖြစ်ကြသော ဦးတင်ဦးနှင့် ဦးဝင်းတင်တို့ နေလည်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိပါသည်ဟု သတင်းရရှ်ိပါသည်.။
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း တွင် အာဏာပိုင် များ၏လုံခြုံရေး ဂိတ် ကတော့ လုံးဝ မရှိတော့ပါဘူးဟု သတင်းရရှိပါသည်.။ ခြံရှေ့ တွင်ထားရှိသော လုံခြုံရေးဂိတ် ကတော့ ရှိနေဆဲလို့ သိရှိရပါသည်.။
သူမ ၏နေအိမ်ခြံရှေ့ တွင် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များနှင့် နအဖရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များလဲ ရောက်ရှိနေပါသည်.။ပြည်သူများနှင့် အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များလည်းရှိနေပါသည်.။ပြည်သူလူထု အမြောက်အများ ရောက်ရှိနေကြပါသည့်ဟု သတင်းရရှိပါသည်.။
သူမ၏ခြံရှေ့တွင်ပြည်သူလူထု (၁၀၀၀)ကျော်လောက်စောင့်ကြို နေကြပါတယ်လို့သိရပါသည်.။ပြည်တွင်း ပြည်ပ
သတင်းထောက် ရာကျော်ကိုလဲ တွေ့မြင်နေရပါသည်.။အရပ်ဝတ် ထောက်လှမ်းရေးများကလည်း တော်တော်များများရောက်ရှိနေသည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်.။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာလည်း လုံထိန်းကားများ လှည့်လည် နေကြပါတယ်လို့လည်းသိရှိရပါသည်.။နအဖ ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်များ လည်း အများအပြား သူမ၏ ခြံရှေ့တွင် လည်း ရှိနေပါတယ်လို့ သိရှိရပါသည်.။
ညနေခင်း တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းတွင် ပြည်သူ လူထု ထောင်ပေါင်းများစွာ ရောက်ရှိ နေကြပါသည်.။ပြည်သူများအား စည်းကမ်း ရှိစွာ နေပေးဘို့ကို ဘဘဦးဝင်းတင် မှ လာရောက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့လည်းသိရှိရပါသည်.။
ညနေခင်း ၅နာရီ အချိန်တွင် သူမ၏ အိမ်ရှေ့ မှ ဂိတ်ကိုသိမ်းနေပါသည်ဟု သတင်း ရရှိပါသည်.။သတင်း သေချာအောင် ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲပါ.။
သူမ ၏ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက သတင်းဌာနများကို ပြောထားတာ ကတော့ ၁၃ရက်နေ့ မှာတော့သူမ၏ လွတ်မြောက်ရက်စေ့တာပါဘဲ၊ သူတို့ဥပဒေအတိုင်းဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စပြီး Move လုပ်သွားတဲ့ အချိန်က ည(၇)နာရီ၊... အဲ့တော့ သူတို့ တိတိကျကျ လုပ်ရင်တော့ ည(၇)နာရီ ဖြစ်မယ်လို့လည်း ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်.။
မြန်မာ ပြည်ဟာ အမေ ဦးဆောင်မှ တိုးတက်နိုင်မှာပါ..။
ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဘဘဦးဝင်းတင်တို့ မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ချိန်ကိုစောင့်ကြို နေသော ပြည်သူများကို ဖြေကြားနေသောရုပ်သံ မြင်ကွင်း
သံတမန်များနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ
သတင်းရင်းမြစ်...မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၃ မိနစ်
ယနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားကြိုဆိုနေကြသောအဖွဲ့ဝင်များ နှင့်ပြည်သူများ၏သတင်းဓာတ်ပုံမြင်ကွင်း
ဲ့ယနေ့တွင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် များနှင့် ပြည်သူများ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာမည်ဟုသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသောကြောင့် စောင့်ဆိုင်း ကြိုဆိုနေကြသော ဓာတ်ပုံသတင်း
အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူ များ အား ကြိုဆိုဘို့ မစောင့် မနေ ရလို့ အမိန့် မထုတ်ထားပေမယ့် ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအမှန် ကတော့ ကြိုဆိုဘို့ အမိန့်ကို ထုတ်စရာ မလိုဘဲ ကြိုဆိုလျက်ပါ..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေလို့ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းနေကြသော ပြည်သူများ၏ဆန္ဒအမှန် ကြွေးကြော်သံများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အဖွဲ့ဝင်များ နှင့်ပြည်သူများက တကယ် ဆန္ဒအမှန်၊မေတ္တာတရားအပြည့်နှင့် စောင့်ကြိုနေလျက်ပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြည်သူလူထု က တကယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ အပြောနဲ့မဟုတ် လက်တွေ့ပြနေကြသောဓာတ်ပုံပါ
အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူများအား ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဘဘဦးဝင်းတင်မှ မနက်ဖြန်မှပြန်လာပါရန်မေတ္တာရပ်ခံနေစဉ်
ဓာတ်ပုံ များပေးပို့ ပေးသော ကိုကေလတ် အားကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်.။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေယနေ့ နေ့လည်တွင် သူမနေထိုင်ရာ နေအိမ်သို့ ရောက်နေပြီး လွှတ်ပေးမဲ့အကြောင်း လက်မှတ် ထိုးပြီးပြီလို့ပြောပါသည်။ မကြာခင်လွှတ်ပေးမဲ့ဝရမ်းအမိန့်စာရတာနဲ့ချက်ချင်း လွှတ်မည် ဟုသတင်း ရရှိ ပါသည်.။သေချာထပ်မံ သိရှိပါက ထပ်မံဖော်ပြပေးသွားပါမည်.။
ယနေ့ (၁၂.၁၁.၂၀၁၀) ညနေ (၄)နာရီ အချိန်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လွတ်ပေးပါမည်ဟု အာဏာပိုင်များကပြောကြားလိုက်ပါသည်ဟုသိရပါသည်.။
အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြည့်ညှပ်နေပြီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုဖို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးရဲ့ အတွင်းအပြင်မှာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူငယ်တွေ၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ စည်ကားနေပါတယ်။
“ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းက ခေါင်းဆောင်တွေ ရုံးရှေ့မှာ အကုန်နီးပါး ရောက်နေကြတယ်။ လူငယ်တွေလည်း တော်တော်များများ ရောက်နေကြတယ်။ ရုံးရှေ့မှာက ပရိသတ်က ၈ဝဝ - ၁ဝဝဝ လောက် ရောက်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါသည်။
အဖွဲ့ချုပ် ရုံးထဲမှာလည်း အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များပြည့်ညှပ်နေသည်။ လူငယ်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံတွေကို ပိုစတာလို ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် တုတ်တံလေးတွေနဲ့ ကြွေးကြော် လို့ရအောင် လုပ်ထားကြလို့ပြောပါတယ်။ လူငယ်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ အင်္ကျီတွေ ဝတ်ဆင် ထားကြပါတယ်လို့
ယနေ့ နေလည် တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံခြား သံတမန်များ သူ၏ နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံ နေသည်လည်းသိရပါသည်.။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လည်းတွေ့ဆုံမည်ဟုသိရှိရပါသည်.။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ တွင်လွတ်မြောက် ရပါ မည်ဟုသံတမန်များဆီ မှ သတင်း ရရှိပါသည်.။နအဖ အာဏာပိုင် များကတော့ တရားဝင် သတင်း မထုတ်ပြန် သေးပါ.။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် နေအိမ်မှ အပြင်သို့ မထွက်ရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်.။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား နအဖ စစ်အာဏာရှင်များက ကန့်သတ်ချက်၊ချွင်းချက် ၊များဖြင့် ပြုလုပ် မည်ဟု အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ မှ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါသည်.။ထိုကဲ့သို့ နအဖ စစ်အာဏာရှင်များက ပြုလုပ်လာပါက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က လုံးဝ လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်း မှတဆင့် သတင်းစကားများထုတ်ပြန် ထားခဲ့ပါသည်.။
ယနေ့ ညနေစောင်းထိ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးရှေ့တွင် အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် များသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုလျက်ရှိသည်။ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များအား ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဘဘဦးဝင်းတင် တို့ မှ မနက်ဖြန်မှ ပြန်လာပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ၍ ပြောကြားနေသည်ဟု သတင်းရရှိ ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, November 12, 2010 Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံးဝလွတ်မြောက်မည်ဟု အပြည့်အဝ ယုံကြည်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းပြောဆို...
ယနေအဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှ ဘဘဦးဝင်းတင်နှင့် အဖွဲ့ချုပ်လူကြီးများ...
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် လာမည့် စနေနေ့မှာ လုံးဝလွတ်မြောက်မည်ဟု အပြည့်အဝ ယုံကြည်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်..။
မေး။...။ အန်ကယ် အန်တီစု ပြန်လွတ်မယ့် အပေါ် အန်ကယ့် အမြင်လေး ပြောပြပေးပါ...။
ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း..။...။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံးဝလွတ်မယ်လို့ အန်ကယ်ပြောလိုပါတယ်..။
မေး။..။ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်လောက်ပါလဲ အန်ကယ်..။
ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း..။....။ ၁၃ရက်နေ့ပေါ့ သူတို့ဥပဒေအတိုင်းဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စပြီး Move လုပ်သွားတဲ့ အချိန်က ည(၇)နာရီပေါ့... အဲ့တော့ သူတို့ တိတိကျကျ လုပ်ရင်တော့ ည(၇)နာရီပေါ့။ ဒါပေမယ့် နေ့ခင်း လွှတ်ရင်လည်း ရပါတယ်ဗျာ... သူတို့ အဲ့လို တိတိကျကျ လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ် ။ ဒေါ်စုလွတ်ဖို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်..။ ဟုပြောဆိုသွားပါတယ်..
အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ ကြိုဆိုရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပုံ
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မစ္စတာဂျွန်ယက်တော နေအိမ်သို့ ဝင်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်ကျခံရန် အမိန်ချမှတ်ခံရပြီးမှ နအဖဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အမိန်ဖြင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁နှစ်ခွဲကျခံခဲ့ရပြီး.. လာမယ့် ၁၃ရက်နေ့မှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ရက် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ လာမည့် ၁၃ရက်နေ့ဟာ ရုံးပိတ်ရက် စနေနေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၂ရက်နေ့ သောကြာနေ့မှာ လွတ်မြောက် လာနိုင်တယ်လို့လည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ အထူးမျှော်လင့်နေကြပါတယ်...။
အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ လူထုခေါင်းဆောင်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပုံ.. (ဓာတ်ပုံများ AP)
ယနေ့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာလျှင် ကြိုဆိုဖို့အတွက် ကြိုဆိုရေးလုပ်ငန်းများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေပြီး အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ အထူးများပြားကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်လူငယ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ပြောဆိုပါတယ်..။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းပြည့်မည့် စနေနေ့မှာ ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်သည့်အတွက် သောကြာနေ့မှာ လွတ်မြောက်လာဖို့ အထူးမျှော်လင့်နေကြပါတယ်..။ သောကြာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာလည်း အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆေးရုံများမှာ သွေးလှူဒါန်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမည့် လူထုခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအတွက် အဖွဲ့ချုပ်လူငယ် အယောက်(၁၀၀)ကျော် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်..။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ (၁၉၈၈)မှ (၂၀၁၀)ခုနှစ်အထိ (၂၂)နှစ်တာ ကာလအတွင်း စုစုပေါင်း ၁၅နှစ်ကျော် (၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်..။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Friday, November 12, 2010 Links to this post
Labels: မျှဝေခြင်း, သတင်း
APF သတင်းဌာန မှ ဂျပန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ထိုးရု ယာမဂျိဟာ ယနေ့ ညနေတွင် မဲဆောက် မှပြန်လည်ထွက်ခွာ
နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက် မှာ ဂျပန်နိုင်ငံသားမစ္စတာ ထိုးရု ယာမဂျိဟာ အသက်(၄၉)နှစ်သည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တံတားအောက်ကနေ ဘောနဲ့ နံနက် ၈း၃၀ မှာ မြ၀တီကို ကူးပြီး ၀င်ရောက်သတင်းရယူသူ အား မြန်မာ အာဏာပိုင် များကသူအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါသည်.။
ဂျပန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ထိုးရု ယာမဂျိဟာ အား မြန်မာအာဏာပိုင် များသည် မြဝတီရဲစခန်းတွင် (၂)ညထားပြီး၊ (၉.၁၁.၂၀၁၀)နေ့တွင် မြဝတီ ဘက်ကမ်းလှေဂိတ် အမှတ်(၂)ဂိတ်မှ ညနေ(၅)နာရီတွင် ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပါသည်.။
ဂျပန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ထိုးရု ယာမဂျိဟာ အားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ် ဘောပင်ဗွီဒီယိုကင်မ၇ာတချောင်း၊ ဂျပန်ဖုန်းတလုံး၊ ထိုင်းဖုန်းတလုံး ၊ နှင့် APF သတင်းဌာန ကဒ်ပြား နှင့် passport တို့ အားသိမ်းဆည်းထားပြီး၊
ပြန်လည် လွတ်ပေးသောအခါ သူ၏ ပစ္စည်းများ အားလုံးကို ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်.။
ဂျပန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ထိုးရု ယာမဂျိဟာသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စွာဖြင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့ပါသည်.။ယနေ့ (၁၁.၁၁.၂၀၁၀) နေ့လည် (၁)နာရီ အချိန်တွင် သတင်းဌာန များနှင့် သူတည်ခိုရာ ဟိုတယ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ရန် ချိန်းဆိုထားရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ခွင့်မပြုပါသဖြင့် မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ရပါလို့ သတင်းရရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ထိုးရု ယာမဂျိဟာ သည် ယနေ့ (၁၁.၁၁.၂၀၁၀) ညနေတွင် မဲဆောက်မြို့ မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပါသည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်.။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သားငယ်ဖြစ်သူ ကင်မ် ခေါ် မောင်ထိန်လင်း အား မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်ခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သားငယ်ဖြစ်သူ ကင်မ် ခေါ် ကိုထိန်လင်းဟာ မိခင်နဲ့ တွေ့ရအောင် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ လျှောက်ထား ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ ရောက်ရှိ နေ ပြီး။ယနေ့တွင် မြန်မာ သံရုံးမှာ ဗီဇာ ထုတ် ပေးလိုက်ပါတယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်.။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းကလဲ ဥပဒေအရဆိုရင် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားလွတ်ပေးရပါမည်လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်.။နိုဝင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့သည် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်နေသောကြောင့် မနက်ဖြန် တွင် အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် များစောင့်မျှော်လျက်ရှိပါသည်.။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် လူငယ် (၁၀၀) ဦး က လုံခြုံ ရေးယူ ပေးရန်စောင့်ကြို လျက်ရှိပါသည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်.။
နအဖ ရဲ့ မသမာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း (ကြေညာချက် အမှတ် -၁၂၂/၂၀၁၀)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း (ကြေညာချက် အမှတ် -၁၂၃/၂၀၁၀)နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း (ကြေညာချက် အမှတ်- ၁၂၄/၂၀၁၀)တို့ကို နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲတို့က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ (ခ)နှင့်အညီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆၀ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ (ခ)နှင့်အညီ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၃ ဦးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ (ခ)နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၉ ဦးတို့အား ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နအဖ ရဲ့ မသမာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ အားကာတွန်းနဲ့ပုံဖော်
ထိုင်းသတင်းဌာန များတွင် နအဖတပ်နှင့် DKBA တပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းကိုဖော်ပြရုပ်သံမြင်ကွင်း
နအဖ ထင်သလို မချဉ်တဲ့ ကမ္ဘာ
နအဖ ထင်သလို မချဉ်တဲ့ ကမ္ဘာ ( စစ်မုန်းသူ )
No vote ပဲဖြစ်ဖြစ် I vote ပဲဖြစ်ဖြစ် သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကို နအဖက ဘာလို့လုပ်တာလည်း ? ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်းဆက်နေသွားရင်ရော မဖြစ်ဘူးလား ? ကျနော့်အမြင်ကိုတင်ပြကြည့်မယ်နော်----- သူတို့ ဒီအတိုင်းဆက်နေသွားရင်.. တိုင်းပြည်ဟာ ဆင်းရဲတွင်းထဲ နက်သထက်ပိုနက်လာမယ်ဆိုတာကို သိတယ်၊ သိကိုသိတယ်။
အဲသလို ဆင်းရဲတွင်းနက်လာလို့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ လူထုက အုံကြွပြီဆို သူတို့ရဲ့နိဂုံးကိုလည်း သဘောပေါက်တယ်။ ဘာလို့ဆင်းရဲတွင်းနက်လာမှာလည်း ---- ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှ အထီးကျန်နေလို့မရတော့ဘူး၊ နေချင်သပဆိုနေကြည့်လေ--
ဘာတွေဖြစ်လာလိမ့်မလည်း…အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ ကျူးဘားလို့ နိုင်ငံပဲကြည့်လိုက်ပါ.. နောက်ဆုံးမခံနိုင်လို့ ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးတွေလုပ်လာရပြီ၊ ဘယ်ပြည်သူက ကြာရှည်အငတ်ခံနိုင်မှာလည်း၊ ဒုက္ခခံနိုင်မလည်း ပေါက်ကွဲထွက်လာမှာပဲ အဲဒီလို ပေါက်ကွဲမှု့ တွေကြောင့် ဇာတ်သိမ်းမလှတဲ့ အာဏာရှင် သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလည်း နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များမသိဘူးမထင်ပါနဲ့ သိပါတယ်။
အဲဒါကို ကုစားဘို့ နအဖဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်မစဉ်းစားပဲ ဆေးမြီးတို နဲ့ကုဘို့ မမှန်ကန်တဲ့ အခြေခံဥပဒေကို မရိုးမသားပြဌာန်းတယ် ၊ ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကိုရွေးချယ်တယ်။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုရော မှန်မှန်ကန်ကန်အကောင်ထည်ဖော်ရဲ့လား ၊ မဖော်တာအားလုံးသိနေပါပြီ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ( Election ) မှမဟုတ်တာ ( Selection ) ရွေးထုတ်ပွဲပဲ၊ ဒါကိုရွေးကောက်ပွဲထင်ပြီး လျှောက်မိကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအပြစ်မဆိုသာပါဘူး၊ အဲသလိုရက်စက်လိမ့်မယ်လိုမှမထင်မိတာ၊ တကယ်တော့ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ဘယ်အာဏာရှင်မှ ရက်စက်ဘို့ဝန်မလေးတတ်ဘူးဆိုတာ အစဉ်လာပါ၊ အဲဒီတော့ လက်ရှိ နအဖ ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရခြင်းဟာလည်း.. နိုင်ငံတကာကိုဝင်ဆန့်ဘို့ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှတိုင်းပြည် ကျဆင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့လွယ်လွယ်တွေးခဲ့တာကိုး၊ တနည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို အချဉ်လို့ထင်မိတာကို၊ သူတို့ ထင်သလို ကမ္ဘာကြီးကရောချဉ်ပါသလား၊ အခုရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသလား၊ တကယ်တော့ နအဖ အကြံက နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတွေမြန်မာမှာဝင်ရောက်လာဘို့ ၊ အဲဒါမှတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်မယ်၊ အဲဒါမှ လူထုအုံကြွမှု့မဖြစ်မယ်။ သူတို့အေးအေးလူလူတသက်စာအုပ်ချုပ်သွားနိုင်မယ် ဒီလိုတွေးတာကိုး၊ သူတို့တွေးသလို ထင်သလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပါသလား၊ အခုရွှေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ် ၈၀%မကလို့ ၁၀၀%အပြည့်နဲ့ပဲနိုင်နိုင် သိပ်ပူစရာမရှိပါဘူး၊
ဒီရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အဓိက စီးပွားမြှုတ်နှံနိုင်တဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကမှထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါ၊ မထောက်ခံတော့ရော ဂရုစိုက်စရာလားလို့မေးခဲ့ရင် ကျနော်ကလည်းပြန်မေးမယ် ဒါလိုခြင်လို့ ဒါလုပ်တာ ဒါမရတော့ ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားသလည်း အလကားပဲပေါ့ဆိုရင် ဘာပြောမလည်း၊ အဲဒီတော့ အချင်းချင် အထင်တွေမမှားကြပါနဲ့နော်၊ တကယ်တော့ နအဖ လုပ်သင့်တာက ရွှေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး ( ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေရယ်၊ နအဖရယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရယ် ) အဲဒီကနေ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အဲဒါတွေပြီးမှ၊ အခြေခံဥပဒေပြဌာန်း၊ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲလုပ်၊ အဲသလိုမလုပ်သမျှ နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲ အကြိမ် ၁၀၀ လုပ် တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှတိုးတက်လာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံပါ၊ ဘယ်နိင်ငံတကာကမှလည်း စီးပွားလာမမြှုတ်နှံဘူး၊ မွဲပြီးရင်းမွဲဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ အချုပ်ပြောရရင် အဲဒီလမ်းရောက်ဘို့ ဘက်ပေါင်းစုံကကြိုးစားကြပါ၊ တရုတ်လို အာဆီယံလို စီးပွားလာမြှုတ်နှံတာလောက်လေးနဲ့ လူလုံးမလှဘူးဆိုတာကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့၊
ကမ္ဘာကြီး သည် အချဉ်မဟုတ်ပါ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, November 11, 2010 Links to this post
ရခိုင်ပြည် ကြံ့ဖွံ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများ စတင် လုပ်ဆောင်
မင်းပြားမြို့နယ်တွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးအောင်စိန်သာ အသက် (၇၄) နှစ်အား ပြည်ခိုင်ဖြိုး (ကြံ့ဖွံ့) ပါတီ အဖွဲ့ဝင်များက သတ်ဖြတ်ရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ခံနေရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မင်းပြား မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ လွတ်တော် အမတ် နေရာအတွက် ကြံ့ဖွံ့ ပါတီမှ ဦးကျော်မင်းက ၀င်ရောက် အရွေး ခံခဲ့ပြီး ရှုံးနိမ့် သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိန်သာက “ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို သတ်ပစ်မယ်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို့ ပါတီ ရှုံးသွားလို့ ထင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။ သူက ဆက်ပြီး “ကျနော့်ကို သူတို့က မတရား ခြိမ်းခြောက်တာပါ” ဟု ပြောပြ ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် စစ်တွေမြို့တွင်လည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီကို ကော်မရှင်တွင် ကန့်ကွက်မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိသည်။ ရခိုင်ပြည် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အခြေအနေမှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို အသာစီး ရသည့် အနေအထား ရှိနေပြီး ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက အမတ်လောင်း (၄၄) ဦး ၀င်ပြိုင်ရာတွင် (၃၅) ဦး အနိုင်ရသည်ဟု မြို့နယ် အဆင့် က အသိအမှတ်ပြု ခံထားရပြီးဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီနှင့် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်များက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီကို မည်ကဲ့သို့ ယုတ်မာ ကောက်ကျစ်စွာ ဆောင်ရွက်မည်နည်း ဆိုသည်ဟု ပြည်သူများ စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြသည်။
မင်းပြားမြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိန်သာသည် (၁၉၉၀) ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ၀င်ရောင် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံရေးသမား တဦးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်.။
သတင်း... (Arakan Review)
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မဲ့ သံအမတ်ကြီး Ms. Chan အတွက် နှုတ်ဆက်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အန်အယ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေကို ကိုယ်တိုင် လာရောက် ဖိတ်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဩစတြေးလျ သံအမတ်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ၊ အန်အယ်ဒီပါတီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အလေးထား မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာရင် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက တွေ့ခွင့်ရရင် တွေ့လိုကြောင်းလည်း စကားပါးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၄ လမ်းမကြီးဘေးတွင် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲပြီး မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရ
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၀န်းကျင်တွင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဘိုရွှေကုန်းကျေးရွာ အနီးတွင် ရွှေပြည်သာမှ လှော်ကားဘက်သို့ ဓာတ်ငွေ့ပို့လွှတ်သည့် ပိုက်လိုင်းအဆက်မှ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
''အိပ်နေတုန်း အသံအကျယ်ကြီး ကြားလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ လင်းထိန်သွားတယ်။ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ပြီး မီးလောင်တာလို့ သိရတယ်။ အဲဒီပိုက်လိုင်းကို လူတွေ ဖြတ်သွားနေကျပါ။ အခုဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ လူတွေမရှိလို့ အသေအပျောက်တော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ မီးသတ်ကားတွေ ရောက်လာပြီး မီးကို ငြှိမ်းနိုင်လိုက်ကြတယ်။ ထပ်ပြီး အန္တရာယ် မဖြစ်အောင်လို့ အနီးမှာရှိတဲ့ မီးကြိုးတွေ ဖြတ်ချမယ်လို့တော့ ကြားတယ်''ဟု မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို မျက်မြင်တွေ့ သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲ မီးလောင်မှုမှာ မိနစ်၃၀ နီးပါးမျှ ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ မီးသတ်ကားများ၊ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်း ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူများမှ ပြောပြခဲ့သည်။
''မနက် ၃ နာရီလောက်မှာ အိပ်နေရာကနေ အသံကြီးတစ်သံကို ကြားရတယ်။ အသံက တော်တော်လေး ကျယ်တယ်။ အပြင်ကို ထွက်ကြည့်တော့ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးက နီရဲနေပြီး ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိဘူး။ လမ်းမပေါ် ထွက်ကြည့်တော့မှ ဓါတ်ငွေ့ပိုက် ပေါက်တာလို့ သိရတယ်။ မီးတောက်တွေက တော်တော်လေးကို မြင့်တယ်''ဟု ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ၀န်ထမ်းကြီးရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းလမ်းတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးမှ ပြောပြခဲ့သည်။
ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲ မီးလောင်မှုကြောင့် အဆိုပါ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအနီးမှ သစ်ပင်များ မီးလောင်ပြီး မီးလောင်သစ်ရွက်များ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ လွင့်ကျခြင်း၊ ၆၆၀၀ ဗို့အားရှိ ကွန်ကရစ်ဓါတ်တိုင် မီးလောင်ခဲ့ပြီး မီးကြိုးများ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ မီးသီးကွဲ ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်ဟု news-eleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
﻿ နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းတွင် အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသော မသမာတဲ့နအဖရွေးကောက်ပွဲကို တရုတ်နှင့် အာဆီယံချီးကျူး
နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းတွင် မသမာမှုစွဲချက်များဖြင့် အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသော မြန်မာရွေးကောက်ပွဲများကို တရုတ်အစိုးရနှင့် အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ အာဆီယံတို့က ချီးကျူးခဲ့ကြသည်ဟုသိရသည်။
"ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ အစိုးရတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ မူဝါဒလမ်းစဉ်ခုနှစ်ရပ် အတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အရေးပါတဲ့အဆင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုဆိုရမှာပါ"ဟု တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဟောင်လီက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲသည် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ချောချောမွေ့မွေ့နှင့် ပြီးသွားခဲ့ကြောင်း ဟောင်လီက ဆိုသည်။ တရုတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လက်နက်အဓိကရောင်းချသည့် နိုင်ငံဖြစ်သလို သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်ဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံလည်းဖြစ် သည်။
အာဆီယံအဖွဲ့၏အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ဗီယက်နမ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်သော ရွေးကောက်ပွဲသည့် ထင်သာမြင်သာသည့် ရှေ့သို့ချီသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန် အာဆီယံက နှိုးဆော်ပါကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရ၊ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန် အပါအ၀င်နိုင်ငံတကာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ရှုတ်ချနေစဉ်တွင် တရုတ်နှင့်အာဆီယံက မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Ref; AFP, China praises much-criticised Myanmar election
မြဝတီမြို့ ထိန်းချုပ်ရေးအစိုးရသြဇာခံ ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိုလွှဲအပ်
ဗိုလ်မှူးကြီးစောလားပွယ် ခေါ် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး ဦးဆောင်တဲ့ DKBA တပ်မဟာ ၅ တပ်တွေနဲ့ စစ်အစိုးရတပ်တွေ မြဝတီမြို့ပေါ်မှာ ၃ ရက်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက် ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ဒီကနေ့မှာတော့ အခြေအနေတွေ အတော်အတန် ငြိမ်သက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ဖက်ကို ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ မြဝတီမြို့ခံ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေလည်း တစတစနဲ့ မြဝတီဖက်ကို ပြန်နေကြပြီး လူ ၂ ထောင်ကျော် ၃ ထောင်လောက်ကတော့ အခြေအနေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရင်း မဲဆောက်ဖက်မှာပဲ ဆက်ရှိနေကြတယ်လို့ အိမ်မပြန်ရဲသေးတဲ့ မြဝတီမြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ ဗိုလ်မှူးချစ်သူ ဦးစီးတဲီု့္ဘဗ တပ်တွေက မြဝတီမြို့ထဲ စစ်ဝတ်စုံ၊ လက်နက်တွေနဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့တာမို့၊ မြဝတီမြို့ခံတွေကြား အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ မြဝတီမြို့ခံ တဦးက RFA ကို ပြောပြပါတယ် ။
ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်သူ ဦးစီးတဲ့ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မြဝတီမြို့တွင်းကို ဒီကနေ့မနက် ၉ နာရီ လောက်မှာ ဝင်ရောက် ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး မြို့ဝတီမြို့တောင်ဖက် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်ခြားတလျှောက်ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်သူတို့ဟာလည်း ယခင် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့ဝင်တွေပဲ ဖြစ်ကြပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ အလိုကျ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ မြဝတီမြို့ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို အာဏာပိုင်တွေနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက RFAကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက်နေ့တွေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် မြဝတီမြို့အတွင်း ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ လက်ရှိ နောက်ဆုံး အခြေအနေကို မြဝတီမြို့ခံက ပြောပြရာမှာ များသောအားဖြင့်တော့ ပုံမှန်နီးပါး ဖြစ်နေပါပြီလို့ ပြောပါတယ်။
အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ဖို့ မြဝတီ ရဲစခန်းနဲ့ မြဝတီဆေးရုံကို RFA ဖုန်းနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ထိုင်းစစ်တပ် သတင်းရပ်ကွက်က ပြောဆိုတာကတော့ မြဝတီမြို့မှာ မနေ့မနက်က တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အရပ်သားငါးဦးကို ဆေးရုံကနေ သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ ဒဏ်ရာရရှိထားသူ လူနာ၂၃ ဦး ရှိနေပြီး သွေးအလှူခံနေတယ်လို့ သိရကြောင်း ပြောပါတယ်။ သူတို့ရရှိ ထားတဲ့သတင်းအရ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်း အိမ်သုံးလေးလုံး လက်နက်ကြီး ထိမှန်ခဲ့ပြီး ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့က မဆုတ်ခင် ဓာတ်ဆီဆိုင်ကို မီးရှို့သွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြဝတီမြို့က ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသံဒိုင်ဆိုသူကို ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ ဒီကေဘီအေ ခွဲထွက်အဖွဲ့က ဖမ်းသွားတယ်လို့ သတင်းရကြောင်း ထိုင်းစစ်ဖက်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စကRFA အနေနဲ့ သီးခြားအတည်ပြုလို့တော့ မရသေးပါဘူး။
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဖက်က မနေ့က နေ့လည်ပိုင်းမှာ ပြန်လာလို့ရပြီ ဆိုပြီး ပြန်သွားကြတဲ့ အထဲက ဒုက္ခသည်တချို့ဟာ မနေ့ကညနေပိုင်းမှာ ထိုင်းဖက်ခြမ်း ပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြန်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည် ၈၀ဝ လောက်ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မြဝတီဖက်ကို ပြန်ပို့ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာဂဏန်းရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေဟာ ထိုင်းဖက်ခြမ်း တပ်မဟာဂိတ်ဘက်က မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းအပါအဝင် စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူတွေထံမှာ ခိုလှုံနေဆဲ ရှိနေသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီကေဘီအေတပ်တွေ မနက်ပိုင်းက ဘုရားသုံးဆူကနေ ဆုတ်သွားပြီး
ဒီကေဘီအေတပ်တွေ မနက်ပိုင်းက ဘုရားသုံးဆူကနေ ဆုတ်သွားပြီး ကတည်းက မြို့ဟာ ငြိမ်သက်နေပြီး မြဝတီမြုိ့ရဲ့ အခြေအနေကတော့ ပုံမှန် ပြန်မဖြစ်သေးဘူလို့ နယ်စပ်ကနေ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်တွေက သတင်း ပေးပို့ပါတယ်။
ဒီငြိမ်သက်မှုဟာ အချိန်ဆွဲပြီး စစ်ကူ စောင့်နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဒီကေဘီအေက ပြောပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူ မြို့လူထုကို မြို့ကနေ ဆုတ်ခွာဖို့ နအဖ စစ်တပ်က လူထုကို အမိန့်ပေးထားပြီး မြို့ထဲမှာလည်း လက်နက်ကြီးတွေ ဆင်ထားပါတယ်။
အနန်းကွင်း စစ်ဗျှုဟာကနေ ရောက်လာမဲ့ နအဖ စစ်ကူတွေလည်း အခု တရက် ခရီးသာသာမှာ ရှိတဲ့ တောင်စွန်း စခန်းကို ကျောလာနေပြီလို့ ဒီကေဘီအေဘက်က ပြောပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာ မြဝတီမြို့မှာ နေထိုင်သူ သောင်းနဲ့ချီပြီး ထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ခြမ်းကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။
ဒီလူတွေကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ နယ်စပ်က အင်ဂျီအိုတွေက စားနပ်ရိက္ခာ ဆေးဝါးတွေ လိုက်လံကူညီနေတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
တဘက်မှာ မြဝတီမြို့မှာ အခြေအနေက ပုံမှန် မဖြစ်သေးပါဘူး။
နေ့ခင်းပိုင်းက မြန်မာ အစိုးရ စစ်သားတွေ မြို့ထဲကို အတော်များများ ဝင်သွားတော့ မြို့ခံလူထုက ပေါ်တာဆွဲမယ် အမှတ်နဲ့ ထွက်ပြေးကြရာမှာ မဲဆောက်ဖက်ထိ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
မြဝတီကို နအဖ စစ်သားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ရောက်လာသလို ဒီကေဘီအေက ဗိုလ်ကျော်သက်တို့ အဖွဲ့နဲ့ ကေအင်ယူတို့ ပေါင်းပြီး ပြန်လာတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
မြ၀တီခရိုင်တောင်ဘက်ခြမ်းရှိဝေါ်လေကျေးရွာအနီးတ၀ိုက်တွင် နအဖစစ်တပ်မှ81လက်နက်ကြီး ၄လုံးနှင့်လှမ်း၍ ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာသား၄၀၀ကျော်ထိုင်းဘက်သို့ထွက်ပြေး
မြ၀တီခရိုင် တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ ဝေါ်လေကျေးရွာ အနီးတ၀ိုက်တွင် နအဖစစ်တပ်မှ 81 လက်နက်ကြီး ၄လုံးနှင့် လှမ်း၍ ပစ်ခတ် မှုကြောင့် ရွာသား ၄၀၀ကျော် ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေပြီဟု ရွာသားများက ပြောသည်။
ဝေါ်လေရွာသားတဦးက “ဒီမနက် ၁၀နာရီမှာ ဗမာတပ်ဖက်က ဒီကေဘီအေတွေ ရှိနိုင်မယ့်နေရာတွေကို လက်နက်ကြီးနဲ့ ၄ချက်တိ တိ လှမ်းပစ်တယ်။ ရွာထဲမှာတော့ တလုံးမှ မ၀င်သေးဘူး။ လောလောဆယ် ရွာသားတွေ ပြေးလွှားနေတုန်းပဲ။ ထိုင်းဘက်ခြမ်းကို ၄၀၀ကျော်လောက် ကူးပြီ။”ဟု ပြောသည်။
ဝေါ်လေဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသော နအဖ စစ်တပ် စကခ(၈) နည်းဗျူဟာ(၃)မှ ယင်းသို့ ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ နေ့လည်အချိန် ထိ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့နှင့် အဆိုပါ နအဖစစ်တပ်တို့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထိုနယ်မြေတွင် လှုပ်ရှားနေသည့် ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ရင်း(၂၀၁)မှ ဒုရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးစောကြည်အောင်က ပြောသည်။
ဝေါ်လေကျေးရွာအတွင်း ကျန်ရစ်နေသေးသည့် ရွာသားများ၏ ပြောပြချက်အရ လက်ရှိအချိန်တွင် နအဖ စစ်တပ်များသည် ရွာဝင်း ဘောလုံးကွင်းသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ရွာသူရွာသားများကို တစုံတရာမှ ပစ်ခတ်ခြင်း မရှိသော်လည်း ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး၏ နေအိမ် အပါအ၀င် အခြားဒီကေဘီအေ မိသားစုနေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးရန်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာမှူးတစ်ဦးက ယနေ့မနက်တွင် နအဖဘက်မှ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးနေအိမ်ကို လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည် ဟု ကြားသိရကြောင်း ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
မြဝတီသတင်းအားထိုင်းသတင်းဌာန(7) တွင်ဖော်ပြထားသော ည(၁၀:၃၀) သတင်းရုပ်သံမြင်ကွင်း
မြဝတီ သတင်းအား9.11.2010 (12;00)ထိုင်းသတင်းဌာန (9 )တွင်ဖော်ပြနေသော (ရုပ်သံမြင်ကွင်း)
မြ၀တီမြို့တွင် ဖြစ်ပွားသော ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ စစ်တပ် တိုက်ပွဲများကို ကေအန်ယူ များက ပြုလုပ်သည်ဟု နအဖ စစ်အာဏာပိုင် စွပ်စွဲခဲ့သည့် မြန်မာ့အသံ ရုပ်သံသတင်း
ဆရာဦးဝင်းတင် နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ နံနက်ခင်း၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီ ဌာနချုပ်ရုံး တည်ရှိရာမှာ ပြောဆုိုခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, November 10, 2010 Links to this post
မြ၀တီမြို့တွင် နအဖအာဏာပိုင်များဖမ်းဆီးထားသူဂျပန် သတင်းသမား Toru Yamaji ပြန်လွတ်ပြီး
မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က သတင်းသမား Toru Yamaji ကို အင်္ဂါနေ့တွင် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲသတင်းယူရန် မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်စဉ် ၂ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံရပြီး လွတ်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဘန်ကောက်မြို့ ဂျပန်သံရုံးက ပြောသည်။ Yamaji သည် ကလောင်အမည် ဖြစ်သည်။ သူ၏ အမည်ရင်းမှာ Toru Matsumoto ဖြစ်သည်။
တိုကျို အခြေစိုက် APF သတင်းဌာန အကြီးအကဲ အသက် ၄၉ နှစ် အရွယ် Yamaji သည် မြ၀တီမြို့မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီး နောက်တွင် ထိုင်းနယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်သို့ ရောက်လာသည်ဟု ဂျပန် သံအရာရှိတို့က ပြောသည်။
Yamaji သည် တနင်္ဂနွေနေ့က ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းယူရန် မြ၀တီသို့ သွားရောက်စဉ် တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံရသည်။
သတင်းသမား Yamaji ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပုံရသည်ဟု သံတမန်တို့က ပြောသည်။
မြဝတီမြို့ပေါ်မှ ဒီကေဘီအေတပ်များ ဆုတ်ခွါ၊ ဘုရားသုံးဆူတွင် တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်
မြဝတီမြို့ပေါ်ရှိ ဒီကေဘီအေတပ်များက ၎င်းတို့ ခြေကုပ်ယူထားသည့် ချစ်ကြည်ရေးတံတားထိပ်နှင့် မြို့တွင်းနေရာများမှ ဆုတ်ခွါသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသုံးဆူဒေသနှင့် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၅) တည်ရှိရာ ဝေါလေဂွင်များတွင် ယနေ့ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယနေ့နံနက် (၈) နာရီနှင့် (၉) နာရီကြားတွင် မြဝတီမြို့ပေါ်၌ ပစ်ခတ်မှုတချို့ရှိခဲ့သော်လည်း ဒီကေဘီအေ တပ်များမြို့တွင်းမှ ဆုတ်ခွါသွားသည့်အတွက်ကြောင့် မဲဆောက်ရောက် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် တဝက်ခန့် မြဝတီသို့ ယနေ့ နေ့လည် (၂) နာရီခန့်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး(ခေါ်) ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားဗွယ် ဦးစီးသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၅) အခြေစိုက်ရာ ဝေါလေဂွင်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အဆိုပါဒေသရှိ ကျေးရွာများမှ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ထိုင်းဘက်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါလာနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စံခလဘူရီနယ်စပ်မြို့ တဘက်ခြမ်းရှိ ဘုရားသုံးဆူဘက်တွင် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၅) တပ်များနှင့် နအဖစစ်အစိုးရတပ်များ ယနေ့မနက် တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး စစ်အစိုးရဘက်မှ လေယာဉ်သုံးပြီး ပတ်ခတ်မှုကြောင့် ရွာသူရွာသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှုများနှင့် ထိုင်းဘက်သို့ ထွက်ပြေးနေမှုများ ရှိနေကြောင်း ဒီကေဘီအေနှင့်နီးစပ်သည့် ကရင်အမျိုးသားတဦးက ပြောသည်။
သူက “ဘုရားသုံးစူမှာ စစ်တပ်က သူတို့ လေယာဉ်နဲ့ကို လာတယ်။ မနက် (၁ဝ) နာရီလောက်တုန်းက လေယာဉ် ၂ စီး လာတယ်။ သူတို့ ရွာထဲကို ပစ်ထည့်တယ်။ လက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ထားတဲ့ အပေါ်ကနေပြီးတော့ ရွာထဲကိုပစ်တော့ ရွာသားတွေ တော်တော်လေး ထိနေပြီ။ ပြည်သူလူထုလည်း ထိုင်းထဲကို ပြေးလာတယ်။ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတော့ ရှိတယ်။ ဒဏ်ရာရတဲ့သူက ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ မသိဘူး။ သေတာလည်းရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
၈ရက်နေ့အာဏာပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၂၀၁၀ခုနှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေမဲလိမ်ပွဲကြီးကျင်းပဆိုပါလား..
မျှဝေ ပေးပို့သူ ကိုဒေါင်းမာန်ဟုန် အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
နိုဝင်ဘာအတွင်း အားကောင်းသော မုန်တိုင်းတစ်လုံး ထပ်မံဖြစ်ပေါ်နိုင်
နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၌ အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တစ်လုံးထပ်မံဖြစ်ပေါ်ရန် အလားအ လာများရှိနေသည့်အတွက် ကြိုတင် သတိပြုကာကွယ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်က ပြောသည်။
၄င်းက ၂ဝ၁ဝ ရာသီဥတုနှင့် သဏ္ဌာန်တူသောနှစ်များ၏ ရာသီ ဥတုတို့အား နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ နိုဝင် ဘာအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ မုန်တိုင်း ၅ ကြိမ်ဖြစ်ပွားတိုင်း ၃ ကြိမ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက် လေ့ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် နိုဝင်ဘာသည် မိုးလေဝသသမိုင်း၌ မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်သောလဖြစ်သည့်အပြင် ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုဝင်ဘာအတွင်း မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့် သာဓကများလည်းရှိကြောင်း၊ လက် ရှိ၌ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင် ပိုင်းရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူ ချိန်သည် ပုံမှန်ထက် တစ်ဆင့်ပို မြင့်လျက်ရှိပြီး အပူချိန် ၃၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ရှိသည့်အတွက် မုန်တိုင်း ဖြစ်ရန် ပိုမိုအခြေအနေကောင်းလျက် ရှိကြောင်း၊ ၄င်းအပြင်မလက္ကာ ရေလက်ကြားဟုခေါ်သော ကော့သောင်းမြို့၏ တောင်ဘက် ပင်လယ် ပြင်၌ လေထု မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အပြင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းများ တန်းစီ၍ ဖြစ်ပေါ် နေသောကြောင့် နိုဝင်ဘာလအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်ရန် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း သေချာနေသည့်အတွက် ကြိုတင်သတိပြု ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ”အရင်က မုန်တိုင်းတွေက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်း တွေမှာပဲဖြစ်တာများတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ကို ဂီရိမုန်တိုင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက် မှာ ရာသီဥတုပြောင်းသွားတာရှိတဲ့ အပြင်နေရာပါ တောင်ပိုင်းကို ပြောင်း လာတယ်။ ဒီလို ရာသီဥတု ဖြစ်စဉ်တွေ တောင်ပိုင်းကို ရွှေ့လာတဲ့အတွက် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း မဖြစ် မချင်း မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းသွား မယ်။ ဒါပေမဲ့ မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ မိုးက ပြန်ရွာမှာပါ။ မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ကလည်း အလားအလာတွေ ရှိနေတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းဟာ တောင်ပိုင်းရောက်လေ ရေပြင်ဧရိယာ ပိုကျယ်လေဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်ပိုင်းမှာသာ မုန်တိုင်းဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ရေပြင်မှာ မုန်တိုင်းနေဖို့ အချိန်ပိုရတဲ့ အားကောင်းသော မုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ လာနိုင်လို့ ပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုဝင်ဘာလို လမျိုးမှာ မုန်တိုင်းဖြစ်ရင် သင်္ချာလက္ခဏာ ဖြစ်တဲ့ ပါရာဘိုလာပုံစံလမ်းကြောင်း အတိုင်း အနောက်မြောက်၊ မြောက်၊ အရှေ့မြောက် စသည်ဖြင့် ကွေ့ကောက်ပြီး ဧရိယာကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ကိုသွားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သတိထား စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ လိုပါမယ်”ဟု ၄င်းက ထပ်လောင်း ပြောသည်။
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ မိုးလွန်ကာလဖြစ်သော အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလများအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြေမှာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ထိုကာလအတွင်း မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါက မိုးကြိုကာလ မုန် တိုင်းများထက် ပိုမိုအားကောင်း လျက်ရှိသည့်အပြင် အပျက်အစီး ဆုံးရှုံးမှုလည်း ပိုမိုများပြားနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
ယခုရက် ကာလအတွင်း၌ ရန်ကုန်မြို့ လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု ယခင်ကထက် ပိုမိုစစ်ဆေးလာကြောင်း သိရ
အဝေးပြေး ကားဂိတ်များ၊ ရှော့ပင်းစင်တာကြီးများနှင့် လူစည်ကား ရာနေရာများတွင် ယခင်ကာလများထက် လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့်ချထားရေးနှင့်အတူ စစ်ဆေးမှုအပိုင်းတွင်လည်း ပိုမို၍ တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လာကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုလကာလတွင် လူစည်ကားရာ နေရာများဖြစ်သည့် စေတီပုထိုးများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ရှော့ပင်းစင်တာများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ အဝေးပြေးကားဂိတ်များတွင် လုံခြုံရေးများပိုမို၍ ချထားခြင်းနှင့်အတူ စစ်ဆေးမှုအပိုင်းမှာလည်း တိကျ တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လာကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလာကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ထို့အတူ မ.ထ.သ အဝေးပြေး လက်ထောက်ဌာနမှူးဖြစ်သူ ဦးမျိုးဝင်းက "အခုရွေးကောက်ပွဲ ကာလရက်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာဌာန အသီးသီးက အဝေးပြေးကားဝင်း တစ်ခုလုံးမှာ စစ်ဆေးမှုတွေ အရင်ကထက်ပိုပြီးဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ ခရီးသည်တစ်ဦးက ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြားပါရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် သက်သေ အထောက်အထား တစ်ခုပါရမယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့ ပါလာမယ့် အထုပ်အပိုးတွေကို စစ်ဆေးသွားမယ်။ ဒါ့အပြင် ပါဆယ်ပုံးတွေ၊ စာအိတ်တွေကိုလည်း တိကျတဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ လုံခြုံရေးမီးသတ်ဌာ နမှ ဌာနမှူးဖြစ်သူ ဦးထွန်းအောင် ငွေကလည်း "အခုကာလမှာ ဘုရား ကြီးရဲ့ စောင်းတန်းတွေ အကုန်လုံး မှာ သင့်လုံခြုံမှုအတွက် စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်။ ကြည်ဖြူစွာဖြင့် စစ်ဆေးမှုကို လက်ခံပါ၊ မိုင်းသတိရှိပါ စတဲ့ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်ကို ကပ်ထားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ၀န်ထမ်းတွေအပြင် တခြားဝန်ထမ်းတွေ အကုန်လုံးက ဘုရားကိုလာတဲ့ ဘုရားဖူးလာသူတွေ အေးချမ်းစွာ ကုသိုလ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် စစ်ဆေးမှုတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဒီလို စစ်ဆေးပေးရခြင်း အကြောင်းအရင်းက စစ်ဆေးတဲ့သူ တွေကလည်း အမြဲတမ်းသတိရှိနေဖို့။ စစ်ဆေးခံရတဲ့ ဘုရားဖူးတွေက လည်း အမြဲတမ်း သတိရှိစေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း ၀န်ထမ်းတွေကိုအရင်ကထက် ပိုမိုတိုးချဲ့လာပါတယ်" ဟု ယခု ကာလ၌ စစ်ဆေးရေး ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါသည်ဟု news-eleven. ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
မသမာတဲ့နအဖရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့်ကြိုတင်မဲများကို ပယ်ဖျက်ပေးရန်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ကျော်ကြားသူများနှင့်ဂျာနယ်လစ်များ တောင်းဆို
မြဝတီမြို့ခံ မြန်မာပြည်သူ တွေ ရဲ့ ဘဝ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေဆဲ
မြဝတီမြို့ခံ မြန်မာပြည်သူများ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် စွာဖြင့် ကမ်းပေါ်ပြေးတက်နေသော ယနေ့မြင်ကွင်း
မြဝတီဘက် ကမ်းကို မဲဆောက်ဘက်မှ စတင်ပြီးပြန်လည်ဝင်ရောက်သော မိုးကုတ်ဂိတ်မှမြန်မာပြည်သူများ
ယနေ့ ညနေစောင်း မြဝတီမြို့ အခြေအနေ
မြဝတီမြို့ မှ ခေတ္တတိမ်းရှောင်နေကြသော မြန်မာပြည်သူများအား မြဝတီ မြို့သို့ ပြန်လည်မပို့ ဆောင်စဉ် သတင်းဓာတ်ပုံ
ယနေ့ နေ့လည် ( ၂ )နာရီမှစ၍ မြန်မာပြည်သားများအား ပြန်လည် ပြီး မြဝတီမြို့သို့ ပို့ဆောင်နေပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, November 09, 2010 Links to this post
မြဝတီမြို့သို့ ယနေ့နေ့လည် တွင်မြန်မာပြည်သူတချို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်သောသတင်းဓာတ်ပုံ
ယနေ့ နေ့လည် (၂)နာရီခန့်တွင် မြဝတီသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြသော မြန်မာပြည်သူများအားတွေရစဉ်
မြဝတီမြို့ပြင် မှာနေထိုင်ကြသောမြန်မာပြည်သူများ ပြန်လည်လို့ရပါတယ်လို့ ပြောလိုက်သောကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ဘို့တန်းစီနေသော မြန်မာပြည်သူများ
ထိုင်းအာဏာပိုင်များနေရာချထားရေးမှ မိမိတို့အိမ်များသို့ ပြန်လိုသော မြန်မာပြည်သူများ ပြန်လည်လို့ ရပါပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်ပိုက်ပြီးပြန်ရန်ပြင်နေကြစဉ်
မြဝတီဘက်ကမ်းကူးရန်လှေဂိတ်တွင် လှေများမထွက်ရဲသေးလို့ စောင့်စားနေကြရသော မြန်မာပြည်သူများ
မဲဆောက်ဘက်ကမ်းမှထိုင်းအာဏာပိုင်များ က မြန်မာပြည်သူများ အား လှေဂိတ် တွင် ပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်
မဲဆောက်ဘက်မှ မြဝတီဘက်ကမ်းသို့ သွားရောက်ရန်အတွက် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ မှမြန်မာပြည်သူများအား
မြဝတီဘက်ကမ်း သို့ နေ့လည် (၃)နာရီတွင် မြန်မာပြည်သူ တချို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်နေကြစဉ်
ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပြန်တာ နအဖစစ်တပ်များက သေနတ်ဖြင့် ပစ်မည်ကိုကြောင်ရွံ့စွာဖြင့်ပြန်နေကြသောမြန်မာပြည်သူများ
မဲဆောက်ဘက်ကမ်းမှ ထိုင်းအာဏာပိုင်များမြန်မာပြည်သူများအား ကူညီပို့ ဆောင်ပေးစဉ်
ပြည်သူများ မျှော်လင့် နေကြသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ...
မြန်မာ ပြည်ဟာ အမေ ဦးဆောင်မှ တိုးတက်နိုင်မှာပါ..။...
ဘဘဦးတင်ဦးနှင့် ဘဘဦးဝင်းတင်တို့ မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
ယနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်း...
APF သတင်းဌာန မှ ဂျပန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ထိုးရု ယာမဂျ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သားငယ်ဖြစ်သူ ကင်မ် ခေါ် မောင်ထိန...
နအဖ ရဲ့ မသမာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြည်သူ့လွှတ...
ထိုင်းသတင်းဌာန များတွင် နအဖတပ်နှင့် DKBA တပ်များတု...
ရခိုင်ပြည် ကြံ့ဖွံ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများ စတင် လုပ်ဆေ...
NLD ပါတီခေါင်းဆောင်များကို ဩစတြေးလျသံအမတ်ကြီးတွေ့ဆ...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၄ လမ်းမကြီးဘေးတွင် ဓါတ်ငေ...
﻿ နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းတွင် အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံခဲ...
မြဝတီမြို့ ထိန်းချုပ်ရေးအစိုးရသြဇာခံ ကရင်နယ်ခြားစေ...
ဒီကေဘီအေတပ်တွေ မနက်ပိုင်းက ဘုရားသုံးဆူကနေ ဆုတ်သွား...
မြဝတီသတင်းအားထိုင်းသတင်းဌာန(7) တွင်ဖော်ပြထားသော ည(...
မြဝတီ သတင်းအား9.11.2010 (12;00)ထိုင်းသတင်းဌာန (9 )...
မြ၀တီမြို့တွင် ဖြစ်ပွားသော ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ စစ်တပ် ...
ဆရာဦးဝင်းတင် နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ နံနက်ခင်း၊ အင်န်အယ်ဒီပ...
မြ၀တီမြို့တွင် နအဖအာဏာပိုင်များဖမ်းဆီးထားသူဂျပန် သ...
မြဝတီမြို့ပေါ်မှ ဒီကေဘီအေတပ်များ ဆုတ်ခွါ၊ ဘုရားသုံး...
၈ရက်နေ့အာဏာပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ပြည်ထောင်စ...
နိုဝင်ဘာအတွင်း အားကောင်းသော မုန်တိုင်းတစ်လုံး ထပ်မ...
ယခုရက် ကာလအတွင်း၌ ရန်ကုန်မြို့ လူစည်ကားရာ နေရာများ...
မြဝတီမြို့ခံ မြန်မာပြည်သူ တွေ ရဲ့ ဘဝ စိုးရိမ်ထိတ်လ...
မြဝတီမြို့ မှ ခေတ္တတိမ်းရှောင်နေကြသော မြန်မာပြည်သူမ...
မြဝတီမြို့သို့ ယနေ့နေ့လည် တွင်မြန်မာပြည်သူတချို့ြ...
မြဝတီမြို့ DKBA နှင့် မြန်မာစစ်တပ်ကြားတပ်ပွဲ နောင်...
ထိုင်းသတင်းဌာန မှ ယနေ့ ညပိုင်း မြဝတီ မြို့ တိုက်ပွ...
ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းဌာန channel7မှ မြဝတီ တိုက်ပွဲ ...
ယနေ့ နံနက်တွင် မြဝတီဘက်မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထိုင်းန...
ထိုင်းနိုင်ငံ ASTV သတင်းဌာန မှ ထုတ်လွှင့်ပြသနေသောြ...
မြဝတီ မြို့ မှ ပြည်သူများ ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်သို့...
ရွေးကောက်ပွဲ မဲအနိုင်အရှုံး စာရင်း (၁)..
နအဖ ရဲ့ မသမာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကို မသမာတဲ့မဲများနဲ့ ...
မြ၀တီမြို့အစိုးရရုံးကို ဒီကေဘီအေက သိမ်းလိုက်တယ်ဆို...
နအဖ ရဲ့ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲ ရန်ကုန်မြို့ ၏ မဲရုံ...
ယနေ့ *ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာနက ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနယ်စပ်...
နအဖ ရဲ့ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲ အား ဂျပန်သတင်းဌာန AP...
နအဖရဲ့ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲ မနက်ပိုင်းအသံများနှင်...
ယနေ့ နအဖ ရဲ့ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကြီး မနက်(၆)နာရ...
နအဖ ရဲ့ အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ကြံ့ဖွတ်ပါတီကြို...